47 Wezihloko Zobufakazi
UHuimin Edolobheni LaseJiaozuo, Esifundazweni SaseHenan Njalo lapho ngibona noma ngizwa ngomuntu osusiwe esikhundleni njengomholi futhi esezizwa edangele, ebuthakathaka noma ecasukile, ngangiye ngimbukele phansi. Ngangi…
UDing Ning waseDolobheni laseHeze, esifundeni saseShadong Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ibandla belihlele ushintsho emsebenzini wami. Njengoba ngathola lo msebenzi omusha, ngangicabanga ukuthi “ngidinga ukuthatha…
UBaixue Edolobheni LaseShenyang Ngenxa yesidingo somsebenzi, ngadluliselwa kwenye indawo yokusebenza. Ngaleso sikhathi, nganginokubonga okukhulu kuNkulunkulu. Ngezwa sengathi kuningi kakhulu lapho ngangisilele khona, ko…
UWuxin Wasedolobheni laseTaiyuan, esiFundazweni saseShanxi Into esasilokhu siyixoxa ekuhlanganyeleni kwangaphambilini yizindlela ezahanjwa nguPetru noPawulu. Kuthiwa uPetru wayenake ukuzazi yena noNkulunkulu, futhi w…
Ubudlelwane Babantu 2018-03-06 10:13:59
UMiao Xiao edolobheni laseJinan, esiFundazweni saseShandong Ngaphambilini, ngangihlezi ngicabanga ukuthi uma uNkulunkulu wayethi “unopopi futhi uyimbuka elibalekela isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe” wayeqondise …
ULin Qing Edolobheni LaseQingzhou, Esifundazweni iShandong Kule minyaka eminingi yokulandela uNkulunkulu, ngibuyekile ubumnandi bomndeni wami kanye nobenyama yami, bengilokhu ngibhizi usuku lonke ngenza imisebenzi ya…
UMei Jie Edolobheni laseJinan, EsiFundazweni saseShandong Ibandla lisanda kukhipha uhlelo lomsebenzi olufuna ukuthi abaholi bebandla kuwo wonke amazinga babe nomlingani (esinye isisebenzi abazosebenzisana naso). Ngales…
Ubudlelwane Babantu 2018-03-06 21:13:59
UQin Shuting edolobheni laseLinyi, esiFundazweni saseShandong Esikhathini eside, yize noma ngangingayekanga ukudla nokuphuza amanzi kaNkulunkulu, kodwa ngangingakaze ngikuzwe ukukhanya. Ngangiye ngakhuleka kuNkulunkulu …
UXiaojing Edolobheni laseHeze, esiFundazweni saseShandong Ngesikhathi ngasinye ngabona amazwi kaNkulunkulu esitshela ukuba sibe ngabantu abathembekile futhi sikhulume ngendlela eqondile nenembayo, n…
UMoran eLinyi City, eShandong Province Kusukela ngisewumntwana, bengihlale ngibeka ukubaluleka kokuthi abanye abantu bangibona kanjani nangendlela abangibheka ngayo. Ukuze ngithole udumo kwabanye ngakho konke engikwen…
UYi Ran eLaiwu City, eShandong Province Esikhathini esedlule, ngenxa yokungaqondi kwami umgomo ophathelene nokuhlelwa kabusha kwezisebenzi ebandleni, lapho ibandla lishintsha umholi esikhundleni, kwazaleka umcabango kim…
UHuanbao Edolobheni laseDalian, Esifundazweni saseLiaoning Kusukela ngiqala ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla, selokhu ngangibancoma kakhulu abafowethu nodadewethu abakwazi ukwamukela inkonzo yomuntu siqu noKristu, a…
UGan’en Edolobheni LaseHefei, Esifundazweni Sase-Anhui Empilweni yami, yilokhu ngaphila ngamagama athi, “Umuntu akufanele abe nenhliziyo efuna ukulimaza abanye, kodwa aqaphele ukuze angalimali” ekuhlaleni nabantu. Angil…
ukulalela unkulunkulu 2018-03-07 09:13:59
USiqiu Edolobheni LaseSuihua, Esifundazweni saseHeilongjiang Noma nini uma ngibona le ndima elandelayo yamazwi kaNkulunkulu, “Uma kade selokhu wethembeke kakhulu futhi ungithanda, kodwa uhlushwa ukugula, izinkinga zokup…
UXian shang eJinzhong City, eShanxi Province Esikhathini esincane esedlule, zikhathi zonke uma ngizwa ukuthi abashumayeli besifunda beza ebandleni lethu, ngangiye ngizizwe ngingakhululekile kahle. Angizange ngiyiveze im…
UCheng Hao Edolobheni LaseYongzhou, Esifundazweni SaseHunan Umsebenzi umkami kanye nami esiwenzayo ebandleni ukushumayela ivangeli. Esikhathi esifushane esedlule, umkami wakhushulelwa esikhundleni sokuba umqondisi weqem…
UXiaohe eDolobheni lasePuyang, esiFundazweni saseHenan Esikhathini esidlulile, njalo uma ngifunda amazwi ambulwe nguNkulunkulu mayelana nokuthi abantu abemukeli kanjani iqiniso, ngangingakholwa ukuthi lawo mazwi abhekis…
UJiayi Edolobheni LaseFuyang, Esifundazweni Sase-Anhui Imvelo yami inokuzithwala kakhulu; kungakhathaleki ukuthi ngenzani, njalo ngisebenzisa ukuhlakanipha nendlela engizisungulele yona ukuze ngibonise ubuhlakani bami f…
UHe Jiejing IDolobha IHezou, Isifundazwe IGuangxi Udade kanye nami sasibhangqiwe ukuze sibuyekeze izihloko ndawonye. Njengoba sasihlangene, mina ngabona ukuthi kwakungenandaba noma ngabe kwakuwukucula, ku…
UXinyi edolobheni laseXi’an, esiFundazweni saseShaanxi Ekuvakasheleni kwami amabandla kwakamuva, ngizwe kaningi abaholi nabasebenzi bethi abanye abantu, emva kokuhlanganyela nami, baba ngabalandulayo, ababuthakathaka na…
UFan Xing Edolobheni LaseZhumadian, Esifundazweni SaseHenan Esikhathini esedlule, ngahlanganiswa nodade othile ukuze ngiyosebenza emisebenzini ethile. Ngenxa yokuba nokuzithwala nokuzazisa futhi angizange ngifune iqinis…
UFang Li edolobheni lase-Anyang, esiFundazweni saseHenan Kamuva nje ngangicabanga ukuthi ngangingene ebudlelwaneni obunokubambisana. Mina nomlingani engangisebenza naye sasikwazi ukukhuluma nganoma yini, kwesinye isikh…
UYixin Edolobheni LaseShijiazhuang Esifundazweni SaseHebei Ngaphambili, ngangivame ukuzwa abafowethu nodadewethu bethi, “Konke uNkulunkulu akwenzayo okuhle kakhulu; yikho konke abantu abakudingayo.” Ngakwamukela lokhu f…
UXiaowei Edolobheni laseShanghai Esikhathi esithile esadlula, yize noma njalo ngangithola intshisekelo kanye nomhlomulo lapho udade engangisebenza naye abelana nami ukukhanyiseleka akutholile ngenkathi edla futhi ephuza…
UShiji Edolobheni LaseMa’anshan Esifundazweni saseAnhui Ngesikhathi ngisebenza njengomholi ebandleni, umholi wami wayevame ukwabelana nathi ngezibonelo zokuhluleka kwabanye ukuze afundise thina isifundo. Isibonelo: Aban…
ULiu Heng Esifundazweni SaseJiangxi Ngomusa kaNkulunkulu, ngathatha umthwalo wokuba ngumholi webandla. Ngaleso sikhathi, nganginomdlandla omkhulu futhi ngenza isinqumo phambi kukaNkulunkulu: Noma ngihlangabezana nani, n…
Muva nje, ibandla lalibambe ukhetho lokuqoka umholi omusha, kodwa umholi owengamele waphambana nezimiso zebandla, esebenzisa indlela yakhe yokwenza ukhetho. Lapho abanye abafowethu nodadewethu beveza imibono yabo, akazan…
UWenwen Edolobheni LaseChangchun, Esifundazweni SaseJilin Ngokombono wami, njalo ngangicabanga ukuthi uma ukwenza izinto kwangaphandle kusabonakala kufanele lapho abantu bengaboni kukhohlakala, khona-ke kwakubhekwa n…
UShi Han Esifundazweni SaseHebei Ngazalelwa emndenini ompofu wabalimi. Ngangihlakaniphile kusukela ngisemncane, kangangokuthi ngangingalwi nezinye izingane futhi ngangilalela abazali bami, okwangenza “intombazane elu…
UMeng Yu Edolobheni LasePingdingshan, Esifundazweni SaseHenan Ngesinye isikhathi lapho ngenza umsebenzi wami, ngaphawula ukuthi umfowethu othile wayezama ukujabulisa odadewabo, okwakubonakalisa isici esibi sesimo sakhe …